Yini i-SEO enhle? Nayi i-Case Study | Martech Zone
ULwesibili, April 18, 2017 ULwesithathu, April 19, 2017 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule, ngiye kwaba ngempela vocal ngokuthi bangaki abaxhumanisi nama-ejensi embonini yokusesha ye-organic enqaba ukuguquka. Kuyishwa njengoba beqhubeka nokushiya umkhondo wamakhasimende abeke imali eningi kodwa empeleni wabhubhisa amandla abo okuthola igunya elingokwemvelo, isikhundla, kanye nokugcwala.
I-SEO enhle: Isifundo Samacala
Okulandelayo yishadi lesinye sezilinganiso zamagama asemqoka wamakhasimende ethu wakamuva ngokuhamba kwesikhathi kusetshenziswa Semrush:
A - Lokhu ukwethulwa kwewebhusayithi yamakhasimende ngaphansi kwe-ejensi yangaphambilini. Kwakuyisizinda esisha sha ngaphandle kwegunya.
B - Ngemuva kwesikhathi sokungakhuli, i-ejensi ithathe isinqumo sokuqalisa isu elidlulelwe yisikhathi lokwakha izizinda eziningi, iguqule inani labantu elinamakhasi amaningi anothe ngamagama angukhiye, nokuxhumanisa okunamandla emuva.
C - Isiza sikhuphuke kakhulu emazingeni nasekuphithizelweni kwezinto eziphilayo; kodwa-ke, akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi ama-algorithms weGoogle aqede uhlelo lokuxhumanisa emuva bese ephonsa isayithi emuva kunangaphambili elalingelona igunya.
D - I-ejensi yaxoshwa futhi saqashwa ukuthi sithathe isiza kanye nezinga lokusesha le-organic. Ezinyangeni eziyisithupha ezizayo, sakha kabusha isiza, sahlukanisa ama-backlinks anobuthi, saqondisa kabusha zonke izizinda kusizinda esisodwa, saqondisa kabusha amakhasi amaningi angukhiye emakhasini aphakathi, anesihloko esisodwa, akhiqiza okuqukethwe okunothile, kanye ne-infographic. Salandela ukuxhuma i-zero emuva ngaphandle kokuphromotha okukhokhelwayo noma yini. Akukho. Nada.
E - Imiphumela iyaqhubeka nokushayela ukwabelana, ukuzibandakanya nokuguqulwa. Ngaphezulu kokuphakama kwemijikelezo phakathi konyaka odlule nakulo nyaka, amaseshini akhuphukile angama-210%, abasebenzisi bakhuphukile ngama-291%, ukubukwa kwamakhasi kukhuphukile ngo-165%, izinga lokubuyisa lehle ngo-16%, amaseshini amasha anyuke ngo-32%, izivakashi ezibuyayo zikhuphuke ngama-322% . Leli klayenti elithile lisebenzisa izingcingo zebhizinisi, ngakho-ke asinayo imininingwane eqondile yokuguqulwa ngaphandle kocwaningo lwamakholi lapho bebuzwa khona ukuthi zitholwe kanjani. IGoogle iyaqhubeka nokuhola phambili.
Ngiyaqhubeka nokuxwayisa izinkampani eziqasha abeluleki bokusesha abangakaze bacwaninge izethameli, umncintiswano, noma isimilo sabo kusayithi. Ukuxhumanisa i-backlink ngaphandle kokukhiqizwa kwemidiya yedijithali efanelekile, ebalulekile, futhi eyenziwe kahle kakhulu kuzokufaka enkingeni. Siyaqhubeka nokushayela imiphumela yamakhasimende ethu nge- zitholiwe igunya kunokuba Igunya lokho kuyasetshenziswa noma kuyakhokhelwa.
Ukufunda okujulile nobuhlakani bokufakelwa kuyaqhubeka nokushayela i-Google's Rankbrain algorithm. ULarry Kim kuphawulwe:
I-Google izoqhubeka nokuhlola ikhasi lakho ukuthola imibuzo efanele… okwesikhashana. Kepha uma yehluleka ukuheha ukuzibandakanya, izoqhubeka nokufa ukufa okuhamba kancane. Kungahle kulahle amaphesenti ama-3 wethrafikhi ngenyanga - incane kakhulu uze ungayiboni kuze kwephuze kakhulu. Ekugcineni, ikhasi lakho lizovele liphume embangweni wesikhundla.
Kuze kube isikhathi sesihambile.
Izindlela zanamuhla zokusesha eziphilayo azidingi ababonisi bokusesha izolo. Izindlela zanamuhla zokusesha eziphilayo zidinga abathengisi abakhulu bokuthengisa nabokuqukethwe abaqonda ukuthi bangacwaninga kanjani futhi benze imizamo yakho yedijithali izithameli zakho bese ibanikeza izindlela ezenzelwe ukuguqulwa.
Uma umxhumanisi wakho wosesho lwezinto eziphilayo engacwaningi njalo, enikeza okokufaka kumasu akho wokuqukethwe, futhi enze indawo yakho isebenze, sekuyisikhathi sokubheka umaqondana omusha wokusesha. Eqinisweni, singathanda ukusiza - ikakhulukazi uma ungummemezeli omkhulu kakhulu. Okuhlangenwe nakho kwethu lapho akunakuqhathaniswa embonini.
Tags: kubi seookuhle seousezingeni elingukhiyeukusesha okuphilayosearch organic izikhathi ezintshaukubukwa kwamakhasi okusesha okuphilayoizikhathi zokucinga eziphilayoabasebenzisi be-organic searchusezingenisemrushyini okuhle seo
Izifundo Ezi-7 Zokuthengisa Esikhathini Se-E-Commerce